नबिल बैंक दोस्रोपटक यूरोमनीबाट ‘नेपालको उत्कृष्ट बैंक’ घोषित — Sanchar Kendra
१तीन दलबाट को को बन्दैछन् मन्त्री ?
२सरकारमा जानेबारे माधवकुमार नेपाल यत्सो निर्णय, देउवा छक्क, ओली दंग
३प्रचण्डको साथ छोडेर ओलीतिर लागेका यी ४ पूर्व माओवादी नेतालाई लाग्यो अर्को यस्तो झट्का
४दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका ग्राहकका परिवारलाई मेगा बैंकबाट ७ लाख रुपैँया हस्तान्तरण
५पत्रकारका ४ बुँदे माग पूरा गर्न नागरिक दैनिक तयार
६२४ घण्टामा थप ३३६५ संक्रमित थपिए
७फेरी गयो ८.२ म्याग्नेच्युुडको शक्तिशाली भूकम्प, हेर्नुहोस थप विवरणसहित
८विराटनगरका मेयरले मध्यरातमा यस्तो काण्ड मच्च्चाए खुलासा, तर प्रहरी किन बस्यो मौन ?
९मिल्यो मन्त्रीको भागबण्डा, काँग्रेसले ८, माओवादी र जसपाले कति मन्त्रालय पाए ?
१०आयल निगमले किन उल्ट्यायाे आफ्नै निर्णय ? यस्तो रहेछ कारण
११खुल्यो मैलुङखोलाको आइपिओ, कति भर्ने, कहिलेसम्म छ समय ?
१२बाबुराम-उपेन्द्र पक्षबाट देउवा सरकारमा मन्त्री बन्नेहरुको लिष्ट बाहिरियो
नबिल बैंक दोस्रोपटक यूरोमनीबाट ‘नेपालको उत्कृष्ट बैंक’ घोषित
काठमाडाैं । बेलायतको प्रतिष्ठित प्रत्रिका यूरोमनीले लगातार दोस्रोपटक पनि नबिल बैंक लिमिटेडलाई ‘नेपालको उत्कृष्ट बैंक’ घाेषित गरी पुरस्कार प्रदान गरेकाे छ। बैंकले प्रदान गरेको सेवा तथा नाफामा गरेको वृद्धि लगायतलाई आधार मानेर यो अवार्ड प्रदान गर्ने गरिन्छ। नबिललाई समग्र बैकिङ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट ठहराउँदै पुरस्कृत गरिएको हो।
सन् १९९२ मा स्थापना भएको ‘यूरोमनिज् अवार्ड फर एक्सिलेन्स’ बैंकिङ क्षेत्रको एक मौलिक पुरस्कारको रुपमा मानिन्छ। ‘यूरोमनिज् अवार्ड फर एक्सिलेन्स’ ले प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रियस्तरका उत्कृष्ट बैंकहरुलाई पहिचान गरी पुरस्कृत गर्दै आइरहेको छ। नबिल बैंकको हालसम्म ११८ शाखा, १७५ एटीएम र १५०० भन्दा बढि नबिल रेमिट एजेन्टहरु रहेका छन्।
दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका ग्राहकका परिवारलाई मेगा बैंकबाट ७ लाख रुपैँया हस्तान्तरण
खुल्यो मैलुङखोलाको आइपिओ, कति भर्ने, कहिलेसम्म छ समय ?
मेगा बैंकको सेवा अब नागरिक एपमा पनि पाइने
अरुको नाममा आइपिओ भर्ने गर्नुभएको छ ? अब ख्याल गर्नुहोस है ? नत्र फस्नुहोला
कोरोना खोप किन्न एडीबीले नेपालालाई दिने भयो २० अर्ब ऋण
सबैको सहयोग र अटुट विश्वासका कारण मेगा बैंकले सफलता हासिल गर्यो- सिईओ खुञ्जेली
१२औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मेगा बैंकले तयार पार्यो पाँच बर्षे रणनीतिक योजना